यो इजेभ्स्क बोट motostroyeniya विकास गर्न योगदान बढाउनु छैन असंभव छ। पहिलो "IZ" मोडेल भन्छन् र छक्क motopark। "IZ बृहस्पति 2" ठीक यसको दुई मा कमी प्रतिहरू सबै कठिनाइ बाहिर ल्याएको crumbs छ। "बृहस्पति" छैन मान्छे को बस एक मनपर्ने थियो, त्यो अझै पनि एक उच्च शीर्षक motostroyeniya लिजेन्ड कायम रहन्छ। नयाँ डिजाइन, राम्रो प्रदर्शन, शक्ति, बल र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, कम मूल्यहरु - यी राष्ट्रिय सफलता को घटक हो। "आईएल-2 बृहस्पति" र यो दिन गर्न सडक मा देख्न सकिन्छ। र राम्रो कारण प्रशस्त छन्। त्यसैले एक मोटरसाइकल कस्तो? मूल सुरु गर्न।
मोटरसाइकल "IZH बृहस्पति-2" टाढा "sixties" मा आफ्नो क्यारियर सुरु भयो। पहिलो उदाहरण 1957 मा प्रकाश देखे। त्यसपछि यो सरल र unprepossessing नाम अन्तर्गत विश्वव्यापी मोटरसाइकल प्रदर्शनी मा देख्न सकिन्छ "आईएल।" भविष्यमा "बृहस्पति" को प्रोटोटाइप आईएल-56 थियो। यो मोटरसाइकल को एक डिजाइन थप रैखिक दुई-wheeled परिवहन को आधार भएको छ छ। उत्पादन "बृहस्पति आईएल-2" मात्र 1961 थिए। यो बाइक को ठूलो उत्पादन समयमा यसको पहिले नै ज्ञात सबै गर्व नाम पायो। उहाँले एक मोटरसाइकल एकदम एक प्रभावशाली समय बाँचे। पछिल्लो उदाहरणका दस वर्ष सुरूवात पछि ठीक आए - 1971. "IZ बृहस्पति 2" मा वाहक बेल्ट देखि धमकना भएनन्।
नवीनता, वा दुनिया दोस्रो "बृहस्पति" के दियो
यसको predecessors मोटरसाइकल बाट अलिकति फरक। प्रौद्योगिकी र संरचनात्मक मतभेद भए तापनि। नयाँ डिजाइन - एक अलग मुद्दा, तर मोडेल को उपस्थिति मौलिक बदल गरिएको छ। अब, अर्को उहाँले हेर्न थाले "बृहस्पति आईएल-2।" ड्राइभिङ बिजुली पनि आधुनिकीकरण अनुभव। नयाँ प्रकाश नयाँ ताराहरु आवश्यक पर्दछ। खैर, यो बारेमा।
संकेत बाइक थोडा मा रोशनी। कुल, त्यहाँ एक एक गोल अगाडि headlamp उच्च बीम र पछिल्लो बिजुली reflectors छ। तर आजको स्तरअनुसार पर्याप्त छैन। तसर्थ, आधुनिक सवार, "बृहस्पति" मा चढेर व्यवस्था अनुसार पक्ष पालो संकेत राख्नु पर्छ। यो पनि इन्जिन redesigned थियो।
"बृहस्पति आईएल-2" - फोटो निराश छैन
एकदम राम्रो भएको sixties लागि बाइक को डिजाइन। यो राम्रो "बृहस्पति आईएल-2।" देखिन्छ फोटो पूर्ण सबै मोटरसाइकल रंग व्यक्त गर्न सक्दैन। ठूलो Chrome निकास पाइप, भुइँमा समानान्तर चलाउन जो, तुरुन्तै ध्यान आकर्षित। यसमा चिटिक्क क्लासिक फ्रेम त्यहाँ superfluous केही छ। पाङ्ग्रा खोक्रो व्हील arches मा लगाए।
संकुचित इन्जिन, जो तस्वीर को बीचमा देख्न सकिन्छ, यो पक्ष बाहिर sticks। यो पनि इन्धन ट्यांक बारेमा केही भन्न हुँदैन। ड्रप-जस्तो आकार कहिल्यै शानदार भन्दा बढी देखिन्छ। यस उल्लेखनीय विवरण बीच एक राउन्ड गति नाप्ने यन्त्र भेद र अभिलेखमा "बृहस्पति" जारी गर्न सक्नुहुन्छ। तस्विर अर्को नै यो ग्रह सुन्दर छ।
"IZ बृहस्पति 2", आफ्नो "मित्र" को धेरै जस्तै प्रकार बुझाउँछ क्लासिक मोटरसाइकिल को। उहाँलाई विशेषता के हो? पहिले, हरेक "क्लासिक" को मुख्य विशेषता - यो एक प्रत्यक्ष अवतरण छ। सीट यसलाई सहज छ, कम सेट फिर्ता सारे छैन। यो एक सुखद सवारी सीट योगदान पुग्छ।
लामो सडक थकित प्राप्त गर्न, तपाईंले आफ्नो फिर्ता सीधा यस्तो सक्षम राख्न मात्र क्लासिक मोटरसाइकल आवश्यक छ। Pedals अगाडि प्राप्त छैन। तिनीहरूले चालक द्वारा मा कोरिएका हुन्छन्। यसरी, दायाँ कोण समर्थन द्वारा गठन। यो को खुट्टा जो धेरै महत्वपूर्ण छ, बोधो जाने छैन। कम स्टीयरिंग राम्रो ह्यान्डल गर्ने बनाउँछ। को सीङ लो पुग्न आवश्यक छैन कतै टाढा। क्लासिक बाइक राम्रो सडक रूपमा राम्रो महसुस र गरिब सतह मा।
"बृहस्पति आईएल-2" - सुविधा
सबै "भएभित हुनु" उपस्थिति, नवीन विवरण महत्वपूर्ण छन्। मात्र कुरा भुक्तानी गर्नुपर्छ ध्यान - यो प्रदर्शन। तिनीहरूले चम्कने लुकाउँछ कि बाइक बारेमा बताउन सक्छ। र त, यस्तो चिन्ता कुनै पनि वाहन र मोटरसाइकल को मुख्य केन्द्र, इन्जिन छ। पहिलो कुरा त तपाईं इन्जिन हेर्न आवश्यक छ। "आईएल2बृहस्पति" पेट्रोल शक्ति एकाइ, एक पुस-खींच सिस्टम रूपमा सब जो छ। यो पिस्टन को स्नेहन प्राथमिक इन्धन आपूर्ति द्वारा गरिन्छ भन्ने हो। सीधा ग्याँस स्टेशन मा, पेट्रोल गर्न साथै, इन्धन ट्यांक र आवश्यकता इन्जिन तेल भर्न अर्थात्। पहिलो नजर, विवरण को धेरै, तर accustomed, तपाईं यसलाई नोटिस छैन। इन्जिन मा "बृहस्पति" मात्र दुई सिलिन्डरहरु। उनको कुल मात्रा तीन सय चालीस सात क्यूबिक सेन्टिमिटर छ। मोटर IgE उन्नाइस अश्वशक्ति पावर विकास गर्न सक्षम छ। यो हल्का मोटरसाइकिल लागि सामान्य दर छ। इन्धन लागि आपूर्ति राम्रो पुरानो कार्बोरेटर पूरा गर्दछ। मुख्य कुरा बिर्सनु हुँदैन: व्यावहारिक विशेषताहरु। "IZ बृहस्पति 2" अपेक्षाकृत समतल भू-भाग मा प्रति घण्टा एक सय र दस किलोमिटर गति सक्षम छ। "Eighties" को काम बाटो को एक सय किलोमिटर चार र आधा लिटर: इन्धन खपत सानो छ। "बृहस्पति" cooled हावा प्रवाह मार्फत। छैन धेरै प्रभावकारी, बिल्कुल। तर यो समय को लागि साँचो थियो।
क्लासिकल मोडेल को मिलाउने
यो "IZ बृहस्पति 2" लामो समय को लागि उत्पादन भएको थियो कि कुनै गोप्य छ। धेरै छैन पुरानो रुचि गर्न सक्छन्, दयालु आफ्नै को कुरा बाइक हेर्न चाहने मोटरसाइकल rubbed। मात्र एउटा तरिका बाहिर - मिलाउने, एक सरल तरिका मा - पुनर्गठन। विकल्प रूपमा अर्ध-स्थायी रंग गर्न सकिँदैन। नयाँ उज्ज्वल रंग "IZ बृहस्पति 2" नयाँ प्राण मा सास फेर्न। यो बाइक देखि पूर्णतया नयाँ रंग मा प्ले हुनेछ। अन्य कारीगरों बस कुनै पनि भने, घुमक्कड हटाउन। लोन मोटो धेरै प्रभावशाली देखिन्छ।
कारण बिना "IZ बृहस्पति 2" राष्ट्रिय मोटरसाइकल शीर्षक प्राप्त। सबै यो पूर्णता बारेमा भन्छन्।
मोटरसाइकल: प्रकार। क्लासिक र खेल मोटरसाइकिल। विश्व मोटरसाइकल
तिमोथी: रूसी काला तारा को एक जीवनी। कसरी पुरानो तिमोथी?
कसरी जुम्रा को छुटकारा प्राप्त गर्न: परम्परागत र नयाँ मिडिया
Crochet पट्टियां - एक शौक वा पैसा कमाउन तरिका
कम्प्युटर किन नै रिबुट बाहिर कसरी पाउन
"प्रगति 4": प्राविधिक विनिर्देशों। "प्रगति 4" (डुङ्गा): आकार र वजन